Dumar xildhibaano ah oo loo diiday inay isqurxiyaan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Dumar xildhibaano ah oo loo diiday inay isqurxiyaan
Dumar xildhibaano ah oo loo diiday inay isqurxiyaan
Muqdisho september 10 (SNTV):- Sida ay qoreen wargeysyada ka soo baxa dalka Tanzania, afhayeenka baarlamaanka dalka dalkaas Job Ndugai ayaa ku dhawaaqay in fadhiyada baarlamaanka laga mamnucay in ay dumarka la soo galaan iyagoo xiran ciddiyo been abuur ah iuo iyagoo indhaha ku soo xardhay wax yaabaha lagu qarxiyo.
Mr Nduga ayaa sheegay in arrintan loo sameeyay markii mamnuucay markii Wasiir Ku-xigeenka Caafimaadka Faustine Ndugulile uu walaac ka muujiyey khatarta caafimaad ee ay lee yihiin ciddiyaha been abuurka ah iyo wax yaabaha indhaha lagu qurxiyo.
Xayiraaddan ayaa sidoo kale lagu soo dabbaalay martida baarlamaanka immaanaysa sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka Tanzania.
Xildhibaannada ayaa sidoo kale lagu mamnuucay in ay xirtaan dhar gaaban iyo in ay surwaalada Jiinisyada ay baarlamaanka la yimaadaan.
Hadalkan ayuu sheegay Mr. Nduga kaddib wax yer markii wasiir ku xigeenka caafimaadka Dr Faustine Ndugulile uu sheegay dumarka ku jira xildhibaannada aqalka hoose ee baarlamaanka in cidiyaha been abuurka iyo wax yaabaha dumarka ay wajiga ku qurxiyaan ay dhibaato caafimaad ay lee yihiin sidoo kale qarash badan lagu iibiyo.
Waxa uu sheegay in sannad kasta isbitaalka MNH ay ee ku yaalla Caruusha uu qaabilo ugu yaraan 700 oo dumar ah kuwaasoo ka cabanaya markii ay xirteen cidiyaha been abuurka ah iyo wajiga oo midabeeyeen.
Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Tanzania, sheeyadan la mamnuucay ma ahan wax yaabaha la oggolyahay ee dumarka isku qurxiyaan ee dalka ka soo baxa sida cuntooyinka iyo khudaarta laga sameeyo.
Haddaba, mar haddii dumarka baarlamaanka ee Tanzaia laga mamnuucay cidiyaha been abuur ah ee dumarka xirtaan iyo wax yaabaha wajiga lagu qurxiyo waa sidee Soomaaliya oo ka mid ah meelaha laga isticmaalo sheeyadaas, jawaabta Akhristayaasha ayaan u deyneynaa.
Previous articleMuddo 20 sano kadib oo xuduudaah Itoobiya iyo Eritrea dib loo furay
Next articleMareykanka oo ku dhawaaqay inuu xirayo xafiiskii Falastiiniyiinta uu ku lahaa magaalada Washington, DC.